Archive du 13-juil-2021
Mpiasan’ny CTC tsy nahazo karama Manome 48 ora ny fanjakana hamoahana ny vola
Nanao antso nanoloana ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka etsy Ambohidahy omaly ireo mpitsabo teo anivon’ireo CTC nandritr’izao hamehana ara-pahasalamana izao.
Mbola mafana sy miha mangotrangotraka ny adihevitra politika, indrindra fa ny resaka fanovana ny mpikamban’ny governemanta.
Voka-dratsin’ny fifidianana feno hosoka Tsy marin-toerana sy misavoritaka ny Fanjakana
Taratry ny fifidianana 2018 nampalaza ny “doublon” sy ny kajikajy samihafa ny zava-misy mahazo ny Fanjakana Rajoelina ankehitriny.
Clément Jaona “Ara-drariny ny maha lehiben’ny mpanohitra an-dRavalomanana”
“Eto amintsika dia “régime présidentiel”, ary ny zavatra mifanandrina eto amin’ny firenena natolotra hofidiana dia ny IEM sy ny Manifesto.
Fandaminana ny tsena Anatihazo Isotry Tsy vahaolana ny fanisahana mpivarotra
Raha mbola ny fanisahana mpivarotra no eritreretin’ny kaominina atao, hoy ny sefo fokontany etsy Anatihazo Isotry, Jacky Ravaloson, dia tsy vahaolana izany.
Governemanta vaovao Henjakenjana ny ady varotra
Efa nandeha daholo ny tombana toy ny hoe ho governemanta politika no ho atsangana ao anatin’ny governemanta vaovao hipoitra eo.
Orinasam-panjakana SPM Tsy hita izay tena asany 2 taona latsaka aty aoriana
Tany amin’ny volana novambra 2019 no nankatoavana teo anivon’ny filankevitry ny minisitra ny fananganana ny orinasam-panjakana SPM (State Procurement of Madagascar)
Miami any amin’ny morontsirak’i Toamasina Efa nanaovana fanandramana mba tsy hitera-doza
Ho fanatanterahana ny tetikasan’ny Filohampirenena izay hanorina fotodrafitrasa manamorona ny morontsirak’i Toamasina,
Vaksinin’ny Coronavirus Ny ambany kalitao hatrany no hafarana
Efa niteraka resabe farany teo ny mikasika ny vaksiny Covishield, izay lasitra iray na ilay antsoina hoe “générique” amin’ny vaksiny Astrazeneca.
Nikodiadia tany anaty hantsana ilay fiara Mpandeha 4 indray maty , 6 naratra
Nandriaka indray ny rà tany amin’ny làlam-pirenena voalohany na ny RN1. Fiara marika Crafter no nivarina tany anaty hantsana tao Ambohimitarina omaly 12 jolay tokony ho tamin'ny 6 ora maraina.
Rocade d’Iarivo Amin’ny toerana tokony hiampitana ihany no miampita
Na dia noferana ho 50 km isan’ora ihany aza ny hafainganam-pandehan’ireo fiara mampiasa ny lalana Rocade d’Iarivo dia fantatra fa tsy mitsahatra ny fanentanan’ny polisim-pirenena ireo mponina eny an-toerana.
Covid 19-Variant Delta Tokony hitandrina hatrany ny rehetra, hoy Dr Fidy
Na dia efa nangingina aza ny valan’aretina Covid 19 ary efa maresaka indray ny Variant Delta dia nanafatra dokotera Fidy Bariniaina fa tokony mbola hitandrina hatrany ny rehetra ho fiarovana ny aina.